Ekoatora · Mey, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Ekoatora · Mey, 2009
Tantara mikasika ny Ekoatora tamin'ny Mey, 2009
Lova navelan'i mpitarika ny indizeny Mama Tránsito
Teratany 20 Mey 2009
Misaona noho ny fahalasanan'ny iray amin'ny mpitarika eo amin'ny fokonolona, dia ny fahafatesan'i Rosa Elena Tránsito Amaguaña ny fokonolona indizeny, mpikatroka amin'ny fampanajana ny zon'olombelona, ary ny vahoaka Ekoateriana amin'ny ankapobeny. Amin'ny maha-“Mpanorina an'i Ekoatera Vaovao,”azy dia izy, miaraka amin'i Dolores Cacuango [es], fantatra amin'ny hoe Mama Dulu ary ilay...
Media sy Fanoratan-gazety 09 Mey 2009
Ratsy ny fifandraisana nisy teo amin’I Filoha Ekoatoriana Rafael Correa sy ireo mpampita vaovao ary ireo mpanao gazety ao amin’io firenena io. Mety ho ratsiratsy kokoa izany ato aoriana kely, araka ny voalazan’ny gazety La Hora [es], manana drafitra hampihatra ny lalàna Fampandraisana andraikitra ara-tsosialy ny haino aman-jery ny governemantany....
Bolivia 06 Mey 2009
Na dia tany Meksika aza no nisy ny foiben’ny fihanahan’ny otrik’aretina H1N1 , mitady làlana hisorohana sy hanoherana azy ireo firenena hafa manodidina. Mijery akaiky amin’izay ataon’ny governemanta any aminy ireo mpitoraka blaogy ny amin’ny fomba hanalan’izy ireo ny tahotra, sa kosa vao mainka manampy trotraka. Ireo mpitoraka blaogy hafa...